Maxay yihiin siyaabaha lagu heli karo bilaash lacag la'aan ah?
Si aad u hesho dib-u-qabasho dofollow waa mid aad u muhiim ah mudada gaabinta tamarta raadinta. Waxay u adeegaan inay kor u qaadaan awooda ilahaaga shabakada natiijooyinka raadinta. Qof kastaa wuu ogyahay in Google uu qiimo badan ku siinayo dhabarka dambe, isagoo u wareejinaya taraafikada bogagga shabakadda.
Waxaa jira dad badan oo cusub oo ku cusub suuq dijitaalka ah kuwaas oo raadinaya siyaabaha fudud ee loo abuuri karo xiriirrada bogagga shabakaddooda. Si kastaba ha ahaatee, meel fog oo ka mid ah farsamooyinka dhismaha ee isku xirnaanta waxay raacaan tilmaamaha darajaynta Google. Natiijo ahaan, kuwa aan khibradda lahayn ee aan khibradda lahayn waxay helayaan natiijo kasta oo la xidhiidha gaadiidka iyo darajooyinka ama waxay ciqaabi karaan mashiinnada raadinta.
Qodobkani, waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaagno habab wax ku ool ah oo lagu kalsoon yahay si aad u hesho dib-u-celin dofollow iyo kor u qaadida jagooyinka ku yaal natiijooyinka raadinta bogga. Waxaan rajeyneynaa, farsamooyinka dhismaha ee isku xira ayaa kaa caawin doona inaad ka hesho gaadiidka badan oo ka socda makiinadaha raadinta.
Ugu horreyntii, aynu ka wada hadalno sida aan u kala soocno dhabarka iyo dib-u-qabsiga.
Sida loo hubiyo nooca backlinks ee aad leedahay?
Waa muhiim in la ogaado farqiga u dhexeeya noocyada xidhiidhada soo galaya maaddaama ay leeyihiin qiimo kala duwan oo ku habboon guusha raadinta bogagga internetka.
Xiriirinno isku xiran waa iskuxirro "ku" ku shaqeeya qaabkooda iyo xawaaraha isku-dhaafka ah ee ilaha webka illaa mid kale. Siyaabahan oo kale, dib u qabsashooyin dofollow ah oo laga sameeyay shabakadaha internetka ee PR ayaa soo saarey calaamado qiimo leh oo la xidhiidha ilaha la xidhiidha, oo muujinaya Google awoodda ilahaas iyo qiimaha ay isticmaalaan dadka isticmaala.
Si aad u hubisid inaad hesho dib u qaabeyn dhab ah ama haddii kale, waxaad u baahan tahay inaad gujiso oo aad xulato unug. Tusaale ahaan, koodhka HTML ee xiriirka dofollow wuxuu u eg yahay Google, iyo Google.
Dofollow Backlinks waxay faa'iido u leeyihiin xilliga dhismaha isku xidhka ah sida ay ka caawiyaan boggaaga si ay ugu sarreeyaan natiijooyinka raadinta iyo caawinta hagaajinta maamulka domainkaaga, maamulka bogagga iyo PageRank. Waxaa intaa dheer, waxay u sheegaan makiinadaha raadinta ee ku saabsan tayada sare iyo ku-xirnaanta content.
Siyaabaha lagu heli karo dib u habeyn sare oo PR
Commentluv waa plugin WordPress ah oo caan ah waxay u adeegtaa si aad u sameysid isku xirnaantaada faallooyinka ku jira faalooyinka 'Commentluv Enabled Blogs'. Waxaad ka heli kartaa boogaha sida manuucyada u adeegsanaya Google (tusaale ahaan - "tignoolajiyada teknoolajiyada" blogs, "" Faallooyinka caafimaadka ee blogs, "" ereyga muhiimka ah ee aad dooneyso halkan + commentluv blogs, "iyo wixii la mid ah.
Waxaad ku dhisi kartaa dib-u-celin khafiif ah. Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad la xidhiidho bartaada ganacsigaaga ama mawduucyada u oggolaanaya soo-booqdaha martida. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto milkiilaha blogka oo waydii isaga oo ku saabsan soo dhajinta waxyaabaha aad la xiriirto xiriirka dofollow. Soo dir boostada martidaada, iyo boostadaada, waxaad isku xidhi kartaa qaar ka mid ah maqaayadaada cusub. Si aad u hesho barta casriga ah ee martidaada, waxaad samayn kartaa cilmi-baaris Google ama ka faa'iideysan kartaa MyBlogGuest search platform Source .